Olima Dayz lomnqweno yimfumba 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Olima Dayz lomnqweno yimfumba
NgoDayZ Olima Hack, ungazoyisa zombini iZombi kunye nabadlali!
Ukufumana ukufikelela kweyona midlalo mihle inokuthengwa yimali, kanye apha! Thenga isitshixo semveliso yosuku olunye-namhlanje!
I-Gamepron ngumboneleli okhokelayo we-DayZ Hacks kwi-Intanethi ngesizathu-Ukuthenga isitshixo seMveliso yeVeki e-1 namhlanje!
Unokufumana ukufikelela ixesha elide ukuba ukhetha ukwenza njalo! Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
I-DayZ izokuphosa kakhulu, enokubonakala inzima kubadlali abatsha. Nokuba umtsha kumdlalo okanye ufuna nje "ukonyusa", unokuthembela kwiDayZ Olima Hack yokuhambisa! Fumana uncedo olufunayo kwiGamePron.
Dayz Olima kugula ulwazi
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Virtualization yinto ekufuneka uyenzile xa ufuna ukusebenzisa inguqulelo ye-Olima yee-hacks zethu, nkqu nee-Dayz Cheats zethu. Sebenzisa i-DayZ Olima Hack yindlela egqibeleleyo yokwenza izandla zakho zikhohlise ezingayi kutshabalalisa ii-FPS zakho, kuba ayinguye wonke umntu osebenza nekhompyuter enamandla yokudlala imidlalo. Ukuba unayo ikhomputha "ebuthathaka" okanye ufuna ukuba ne-FPS ephezulu kakhulu, usebenzisa i-DayZ Olima Hack iya kusebenza ngokumangalisayo! Ungawuphehlelela umdlalo kwi-Steam okanye Yima wedwa kwaye usebenzise iDayZ yethu yokuHlala.
I-DayZ Wallhack yethu inikezela ngeSitha kunye ne-Item ESP, kunye nolwazi lwe-ESP (njenge-Distance, Skeleton, Clothing, Weapons, Ammo, Food, and Medicine). I-DayZ Aimbot iyamangalisa kwaye inezinto ezininzi onokukhetha kuzo, ezinje ngokuBekwa phambili kwamathambo kunye noMjikelo weFOV oLungelelanisiweyo. Jonga ngakumbi inkqubela phambili nge Gamepron!
Ulwazi lotshaba (umgama, iZombi, indawo)
Umba we-ESP (umgama, iimpahla, izixhobo, i-Ammo, ukutya, ezonyango, iintente, imiphanda)
I-Aimbot (umgama, isitshixo, ithambo)
Malunga noDayz Olima
I-DayZ yethu ye-Olima Hack ilunge ngakumbi kunezinye ii-DayZ Hacks kwimarike ngoku, kwaye kungenxa yawo wonke umsebenzi esiwubeke kuwo. Sifuna ukuqinisekisa ukuba le cheat yayilula kwaye ithe ngqo kubo bonke abasebenzisi bethu be-novice, ke kulula kakhulu ukuyisebenzisa-ungasasaza ngelixa olu qhekeko lwenziwe, njengoko ababukeli bakho bengazukubona ukukopela kunikwe amandla. I-DayZ Hack yeNgaphandle kwaye kuyakufuneka ukhubaze ukukhuselwa ukuze uyisebenzise, ​​ngaphandle koko iflegi engeyiyo inokuthintela isixhobo ekusebenzeni.
Kutheni usebenzisa uDayz Olima ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Akukho mdlalo kumgangatho ofunyanwa apha kwiGamepron, yiyo loo nto abasebenzisi bethu bengazukujonga kwenye indawo ngeemfuno zabo zeSukuZ. Xa uzame isixhobo sethu kwaye uyaluqonda uhlobo lomgangatho ekufuneka usinike wona, akukho sizathu sokuba ufune ukujonga kwenye indawo! Ungadlala iDayZ kwiscreen esigcweleyo ngeDayZ Olima Hack isebenze, uninzi lwababoneleli abanakho ukuzizisa. Iiakhawunti zakho zihlala zikhuselekile xa usebenza neehacks ezivela kwiGamepron, njengoko zonke izinto zethu zokukopela zingafunyanwa kwaye ziya kukunceda ukuthintela ukuvalwa phantse ngalo lonke ixesha.
Sebenzisa imenyu yethu enomdla kumdlalo weqonga ukwenza utshintsho ongathanda ukulubona kakhulu! Awunyanzelekanga ukuba ulungele useto lwesitokhwe esinalo endaweni yoSuku lwethu lwe-Olima, njengoko unokuthatha izinto ezandleni zakho-ukusebenzisa imenyu yomdlalo ekuvumela ukuba wenze uhlengahlengiso lweempukane kuyo yonke iDayZ yethu Iimpawu my. Ungalutshintsha ngokukhawuleza ukuba i-Aimbot izijolise kwiintshaba, okanye uguqule nje ukuba zeziphi iinketho ze-ESP oza kuzibona kwiscreen sakho. Inani lokukhetha libonakala lingenasiphelo, ke dlala ujikeleze kwimenyu yomdlalo kwaye ufumane umxube ogqibeleleyo!
A6. Ewe ixhasa imo yesikrini esigcweleyo.
Zonke izixhobo zethu zilungiselelwe ukuba zingafunyanwa ngexesha lokusetyenziswa, ngenxa yoko awusoze ube nexhala malunga nokuvalwa. Ukhuseleko lubaluleke kakhulu xa ukhetha ukugcoba nge-GamePron!
Yaphula ukungunda kunye nokuqhekeza kwi-DayZ ngendlela efanelekileyo! Thenga isitshixo namhlanje
Ilindelwe Lawula kunye noDayz Olima Hack?